15 ယခုနွေရာသီတွင်ကြည့်ရှုရန် Netflix အစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်ရှင်များ - စာမျက်နှာ ၅ - Netflix အသစ်ထုတ်လုပ်မှုများ
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်ပြပွဲ ၁၅ ခု
15 Shows Movies Watch Netflix This Summer
လူစီဖာ - ခရက်ဒစ်: John P. Fleenor / Netflix
365 Days 2: Netflix ပေါ်ကရုပ်ရှင်ကားအတွက်နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတွေရှိမလား။ Hamilton သည်ဒစ္စနေး Plus အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမည်
Netflix ပြပွဲများနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: The Devil's Advocate
ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်မှာ Keanu Reeves ကပိုပြီးပူပြင်းလာတယ် ဘီလ်နှင့် Ted ဂီတရင်ဆိုင်ရ ဒီနွေရာသီနှင့်စီစဉ်ထားသည် Matrix4အနာဂတ်မှာလာမယ့်။ ရုပ်ရှင်တွေအပြင် မြန်နှုန်း ၁၉၉၇ တွင်သူသည်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် မာရ်နတ်ရဲ့ထောက်ခံသူ Al Pacino နှင့်နီးပါးမသိသော Charlize Theron တို့နှင့်အတူ။
မာရ်နတ်ရဲ့ထောက်ခံသူ Reeves 'Kevin Lomax၊ ဖလော်ရီဒါမှကာကွယ်ရေးရှေ့နေဖြစ်သူသည်တရားရုံး၌မနိုင်လောက်သောအနိုင်ရရှိမှုများနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ သူသည် Lomax ကိုအလုပ်ခန့်ရန်ခန့်အပ်ထားသည့်စွမ်းအားကြီးသောနယူးယောက်ရှေ့နေ John Milton (Pacino) ၏အာရုံကိုဖမ်းယူခဲ့သည်။ ယခုသူသည်သူလိုချင်သမျှအရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းလာသောအခါ Lomax သည်သူ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြေအနေများနှင့်စတင်ကြုံတွေ့ရသောအခါသူ့ကိုယ်သူနှင့်အတူအသက်ရှင်နိုင်မည်လော။
မာရ်နတ်ရဲ့ထောက်ခံသူ မဟုတ်ပါဘူး ရိဗ် '' repertoire အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် , ဒါပေမယ့်ဒါဟာမှောင်မိုက်, အချိန်များတွင်ရယ်စရာနှင့်နက်ရှိုင်းစွာဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပါတယ်။ Reeves နှင့် Pacino ကိုကြည့်ခြင်းသည်စင်ကြယ်သောရွှေဖြစ်ပြီး Pacino တွင်ထူးခြားသော Pacino အချိန်များရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောတရားဝင်ရုပ်ရှင်ကိုနှစ်သက်သူမည်သူမဆို Tom Cruise ကိုနှစ်သက်သည့်နည်းတူ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ချစ်ရန်များစွာရှာလိမ့်မည် The Firm ။ မတူတာက The Firm သို့သော်သင်လိုချင်သောအရာအားလုံးကိုရယူခြင်းသည်အလွန်မတ်စောက်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လာသည်။
နောက်တစ်ခု:10. Paranormal လှုပ်ရှားမှု
Michael Kovac ၏ဓာတ်ပုံ / Getty ၏ Sony Pictures Television / YouTube မူရင်းပုံများ
ဤ Netflix ပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်များသည် ၂၀၂၀ နွေရာသီအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်
ဒီနွေရာသီမှာအိမ်မှာနေလို့လား။ Netflix တွင်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပြီးရာသီဥတုပူပြင်းလာသည်နှင့်အမျှအေးဆေးတည်ငြိမ်လာသည်နှင့်အမျှ Netflix သည်အကြောင်းအရာသစ်များစွာကိုဤနွေရာသီတွင် Netflix ပြပွဲများနှင့် streamer & rsquos lineup မှလာပြီးထွက်ပေါ်လာသောရုပ်ရှင်ကားများကြားတွင်ဖျော်ဖြေမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အသစ်သောအကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။
Netflix သည် ၂၀၂၀ တွင်ကြည့်ရှုသူအမြောက်အများနှင့်အတူသိုလှောင်မှုအတွက်သက်သာစေခဲ့သည်။ ဒီနွေရာသီမှာ rsquos အစီအစဉ်မှာဟာသတွေ၊ ပြဇာတ်တွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့အတူအတိတ်ကပေါက်ကွဲမှုအများအပြားနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အတိုင်းအတာအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုထိတွေ့မှုတို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။
Netflix အစီအစဉ်များနှင့် ၂၀၂၀ နွေရာသီတွင် The Karate Kid Trilogy ကိုကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကကလေးများသည်ရုပ်ရှင်သုံးခုစလုံးတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိကြလိမ့်မည် ကရာတေးကလေး ဇူလိုင်လအတွက် Netflix ကအပေါ် trilogy ပာမြေ။ သင် & rsquore သည်နှစ်တစ်ရာကြာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပထမဆုံးအကြိမ်တွင်ဤဂန္ထဝင်များကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းရှိမရှိ၊ သူတို့သည်ညနေခင်းတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကို ၁၉၈၄ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး Ralph Macchio ကို Teen Beat နှလုံးရောဂါအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Macchio & rsquos Daniel သည်သူ၏မိခင်နှင့်အတူကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းသို့သွားပြီးဘဝသစ်တစ်ခုစတင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကျောင်းတွင်ပြfနာကသူ့ကို Miyagi နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးသမားဖြစ်ပြီးမိတ်ဖက်အနုပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ Mr. Miyagi & rsquos ၏အကူအညီဖြင့်ဒံယေလသည်သူ၏ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေမည့်ခရီးတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခု:14. သကြား Rush
သကြား Rush ။ Image ကိုယဉ်ကျေး Netflix က
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: Sugar Rush
ဇူလိုင်လ 31 ရရှိနိုင်ရာသီ 3
သင် & rsquore အချိန်ကျော်လွန်ဖို့ရှာဖွေနေသည့်အခါကောင်းတစ်ချက်ပြုတ်ပြပွဲကဲ့သို့ကောင်းသော & rsquos နှင့် သကြား Rush ရုပ်မြင်သံကြားရှေ့မှာအချိန်ဖြုန်းဖို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ချိုမြိန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်နွေရာသီတွင်အဓိကကျသည်။ တတိယအကြိမ်အတွက်ဇူလိုင်လတွင်ရာသီသစ်တစ်ခုကျဆင်းလာပြီးနေရာတိုင်းသကြားချစ်သူများအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
ဒီတစ်ခါတော့ သကြား Rush နေရာတွင်ခိုလှုံနေသူများကလည်းလူမှုရေးအရဝေးကွာနေစဉ်ချက်ပြုတ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိသည်။ သင်ဟာနွေ ဦး ရာသီမှာပေါင်မုန့်ဖုတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနွေရာသီမှာအားလပ်ရက်ရာသီမှာအရသာရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဖြုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါအရသာရှိတဲ့အချိုမှုန့်တွေနဲ့အရသာရှိတဲ့မုန့်ဖုတ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆီကိုသင်ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ရှင် Hunter March ကိုတရားသူကြီးများ Candace Nelson နှင့် Adriano Zumbo တို့ထပ်မံပူးပေါင်းမည်။ Zumbo သည်သြစတြေးလျတွင်အကျော်ကြားဆုံး pastry စားဖိုမှူးများအနက်လူသိများပြီးသူသည် Netflix တွင်မုန့်ဖုတ်ပြသခြင်းရှိသည်။
ရာသီ (၃) သည်အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲများ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအသစ်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ကျော်လွန်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးမည်ဟုကတိပေးထားသည်။
Netflix တွင်နေ ၀ င်ရာသီ2ရက်၊ ဓာတ်ပုံ Netflix တွင်ရောင်းချခြင်း
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: Selling Sunset
ရာသီ3ရရှိနိုင်သြဂုတ်လ 7
အဖြစ်မှန်ပြပွဲအမြဲ hit ဖြစ်သွားကြသည်။ သူတို့သည် & ထုတ်လုပ်ရန်စျေးသိပ်မကြီးသော rsquore နှင့်ပရိတ်သတ်များအားအခြားသူများလက်လှမ်းမမှီနိုင်သောနေရာများနှင့်လူနေမှုပုံစံကိုကြည့်ရှုစေသည်။
နေဝင်ချိန်ကိုရောင်းချခြင်း Bravo & rsquos ၏ကျော်ကြားသောခြေရာကို လိုက်၍ စျေးကွက်တွင်အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်အဖြစ်မှန်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည် ဒေါ်လာသန်းစာရင်း franchise, ဒါပေမယ့် Netflix ကြားမှာကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Los Angeles ရှိ Sunset Strip ရှိအကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးအိမ်အချို့တွင်ပရိသတ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သူတို့ရောင်းဖို့ရှိရင်တောင်ဒီအိမ်တွေဟာအများပြည်သူအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အိမ်များသို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။ နေဝင်ချိန်ကိုရောင်းချခြင်း ပရိတ်သတ်များအတွက်စျေးကွက်ရှိအထူးသီးသန့်ဂုဏ်သတ္တိများအချို့အတွင်း၌ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးသည်
၎င်းသည်နာမည်ကြီးများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိသည့်အိမ်များဖြစ်ပြီး၊ သူတို့၏အိမ်များကိုရောင်းသောအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များသည်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာမှန်သမျှနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုင်တွယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
အခုတတိယရာသီမှာ၊ နေဝင်ချိန်ကိုရောင်းချခြင်း အိမ်ခြံမြေများနှင့်အတူမလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမည့်ပြဇာတ်များနှင့်အတူပြသရန်နောက်ထပ်မေးရိုးပြန့်ကျဲနေသောဂုဏ်သတ္တိများရှိမည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ကြီးမားသောမေးခွန်းမှာပြောင်းလဲနေသော LA & rsquos အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်၏ရာသီဥတုနှင့် rsquos ဇာတ်လမ်းသို့ပါ ၀ င်လာမလားဆိုတာပင်ဖြစ်သည်။ သင် & rsquoll ထွက်ရှာတွေ့မှညှိရန်ရှိသည်!
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်များ - John သည်ဂြိုလ်သားများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည်
Netflix မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်တကယ့်အဖြစ်အပျက်များသည် streamer & rsquos ကိုလွှင့်တင်ချိန် မှစ၍ အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက၊ ကျားဘုရင် တိုင်းပြည်နှင့် rsquos စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖမ်းယူနှင့်မရေမတွက်နိုင်သော memes နှင့်လူမှုမီဒီယာစကားများအများကြီးမှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
John သည်ဂြိုလ်သားများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည် isn & rsquot သည်စီးရီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Sundance တွင် rave ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအနိုင်ရခဲ့သောရုပ်ရှင်တိုကားဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းသည်လူတစ် ဦး ထက် ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသောဘ ၀ ကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခု၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသူ၏အနှစ် ၃၀ ကြိုးပမ်းမှုတွင်အိမ်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာလေ့လာရန်တစ်ခုခုရှိကြောင်းသူသဘောပေါက်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Matthew Killip သည်မီချီဂန်ဇာတိ John Shepherd ၏ဇာတ်လမ်းကိုသူ၏နွေးထွေးသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင်ကောင်းကင်သို့တေးသီချင်းများတပ်ဆင်နိုင်သည့်ဂီယာမျှော်စင်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူ၏ဘဝနှင့် rsquos အလုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်သူ၏ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းကိုလျစ်လျူရှု။ မရပါ။ သို့သော်နှစ်များတစ်လျှောက် Shepherd သည်ဘဝနှင့်ဆက်သွယ်မှု၏သဘောသဘာဝအကြောင်းများစွာလေ့လာခဲ့သည်။
Let & rsquos ကရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ လူတွေဟာသူတို့လုပ်သမျှကိုစိတ်ထက်သန်သူတွေအကြောင်းကောင်းတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုကြိုက်တယ်၊ ကျားတွေကိုမွေးတာဖြစ်စေ၊ ET ခေါ်တာလားဖြစ်စေကြိုးစားကြတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ ၁၆ မိနစ်ရုပ်ရှင်ဟာနောက်ကြီးကြီးမားမား & ldquoit & rdquo ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။ Netflix အတွက် feature ။
နောက်တစ်ခု:၁၁။ စာတန် & # 039s Advocate
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: The Devil & rsquos Advocate
ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်မှာ Keanu Reeves ကပိုပြီးပူပြင်းလာတယ် ဘီလ်နှင့် Ted ဂီတရင်ဆိုင်ရ ဒီနွေရာသီနှင့်စီစဉ်ထားသည် Matrix4အနာဂတ်မှာလာမယ့်။ ရုပ်ရှင်တွေအပြင် မြန်နှုန်း ၁၉၉၇ တွင်သူသည်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် မာရ်နတ် & rsquos ထောက်ခံသူ Al Pacino နှင့်နီးပါးမသိသော Charlize Theron တို့နှင့်အတူ။
မာရ်နတ် & rsquos ထောက်ခံသူ Reeves & rsquo Kevin Lomax၊ ဖလော်ရီဒါမှနိမ့်ကျသောကာကွယ်ရေးရှေ့နေဖြစ်သူသည်တရားရုံး၌မယုံကြည်နိုင်လောက်သောအနိုင်ရရှိမှုများကိုဖော်ပြသည်။ သူသည် Lomax ကိုအလုပ်ခန့်ရန်အတွက်စုဆောင်းထားသောစွမ်းအားကြီးသောနယူးယောက်ရှေ့နေ John Milton (Pacino) ၏အာရုံကိုဖမ်းယူခဲ့သည်။ ယခုသူသည်သူလိုချင်သမျှအရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းလာသောအခါ Lomax သည်သူ၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြေအနေများနှင့်စတင်ကြုံတွေ့ရသောအခါသူ့ကိုယ်သူနှင့်အတူအသက်ရှင်နိုင်မည်လော။
မာရ်နတ် & rsquos ထောက်ခံသူ ISN & rsquot ရိဗ် & # x2019 repertoire အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် , ဒါပေမယ့်ဒါဟာမှောင်မိုက်, အချိန်များတွင်ရယ်စရာနှင့်နက်ရှိုင်းစွာဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပါတယ်။ Reeves နှင့် Pacino ကိုကြည့်ခြင်းသည်စင်ကြယ်သောရွှေဖြစ်ပြီး Pacino တွင်ထူးခြားသော Pacino အချိန်များရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောတရားဝင်ရုပ်ရှင်ကိုနှစ်သက်သူမည်သူမဆို Tom Cruise ကိုနှစ်သက်သည့်နည်းတူ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ချစ်ရန်များစွာရှာလိမ့်မည် The Firm ။ မတူတာက The Firm သို့သော်သင်လိုချင်သောအရာအားလုံးကိုရယူခြင်းသည်အလွန်မတ်စောက်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လာသည်။
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: Paranormal Activity
ဒါဟာကတည်းကတစ်မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည် Paranormal လှုပ်ရှားမှု ဂိမ်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော်လည်းရုပ်ရှင်ကားများသည်လက်ကိုင်ကင်မရာထိတ်လန့်ဖွယ်အကောင်းဆုံးနမူနာများအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ Paranormal လှုပ်ရှားမှု နှစ်ပေါင်းများစွာအခြားထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်များတွင်ကျယ်ပြန့်ကူးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှရုပ်ရှင်နှင့်ရိုးရှင်းသောရူပဗေဒသည်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်တည်ရှိဆဲဖြစ်သည်။
ဒီအယူအဆဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရိုးရှင်းပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကဗီဒီယိုကင်မရာတစ်လုံး ၀ ယ်ပြီးသူ့အသက်တာအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်တော့တယ်။ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအရာတွေထူးဆန်းလာတဲ့အခါသူကကင်မရာကိုအသုံးပြုပြီးအားလုံးကိုဖမ်းယူလိုက်တယ်။ အဆိုပါလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံးပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အရာအားလုံးအစ်မတွေ Katie နှင့် Kristy ပတ်ပတ်လည်ဆုံလည်အဆုံးသတ်ပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်များတွင်နှောင့်အယှက်များ၏အရင်းအမြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး & ဒါဟာ rsquos လုံးဝကြောက်စရာကောင်းတဲ့။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်စီစဉ်ထားသည့်သတ္တမမြောက်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ပုဒ်ရှိသည့်အတွက်ယခုဂိမ်းကိုစတင်ခဲ့သောရုပ်ရှင်ကိုဖမ်းစားရန်အချိန်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (ဤရောဂါသည်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်) ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်များစွာနည်းတူပထမဆုံး & rsquos လူတွေပြောနေတာကိုရရှိစေတဲ့ရုပ်ရှင် Paranormal လှုပ်ရှားမှု ဒါကြောင့် & rsquos မူရင်းပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ဤရုပ်ရှင်ထိတ်လန့်စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါငျးတို့သစဉ်းစားရန်အမြဲပျော်စရာ။
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: Love on the Spectrum
Netflix ကကောင်းသောချိန်းတွေ့ခြင်းပြပွဲကိုနှစ်သက်သည် အဆိုပါ Spectrum အပေါ်မတ်ေတာ အသစ်အစိတ်အပိုင်းလေးခုပါသည့်စီးရီးသည်ချိန်းတွေ့ခြင်းကမ္ဘာကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသောသူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော။ Netflix ပေါ်ရှိချိန်းတွေ့မှုအများစုသည်ရာသီတစ်လျှောက်လုံးဇာတ်လမ်းများကိုလိုက်နာကြသည် အဆိုပါ Spectrum အပေါ်မတ်ေတာ ကြည့်ရှုသူများသည်သူတို့၏ခရီးများကိုစတင်ခြင်းမှအဆုံးအထိကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်တူညီသောမိတ်ဆွေအုပ်စုတစ်စုလုံးကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Spectrum အပေါ်မတ်ေတာ မူလကသြစတြေးလျတွင် 2019 ခုနှစ်တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်မူလပရိုဂရမ်၏ Netflix ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အောင်မြင်လျှင်၎င်းသည်ပိုမိုငယ်ရွယ်သောလူကြီးများနောက်သို့လိုက်ရန်အမေရိကန်ရာသီသို့ပိုမိုတက်ကြွဖွယ်ရှိလိမ့်မည်။ ရောင်စဉ်။
Netflix ၏မူရင်းပြပွဲ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းရန်ပြီးပြည့်စုံသောပွဲကိုပြသပြီး၎င်းသည်လူစည်ကားပြီးသားအဖြစ်အပျက်ပြပွဲစျေးကွက်တွင်ကိုယ်ပိုင်နယ်ပယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသောကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်စားပြုမှုတွင်ရှေ့သို့တိုးရန်အဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရောင်စဉ်တန်းရှိလူများအတွက်သူတို့၏ဘ ၀ နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများကိုပြသရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောချိန်းတွေ့သည့်ပွဲများသည်လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်ရန်စျေးသိပ်မကြီးသောကြောင့်၎င်းသည် Netflix အတွက်အကျိုးအမြတ်နည်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: Poltergeist
& ldquoThey & rsquore here! & rdquo It & rdquo သည်၎င်းထဲမှတစ်ခုမှထင်ရှားသောလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံး & # 8211 နှင့်အများဆုံးကိုးကား & # 8211 ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်အားလုံးအချိန် ။ Poltergeist တူ, ဇူလိုင်လအတွက် Netflix ကမှလာမယ့်နေသည် Paranormal လှုပ်ရှားမှု , ဒါဟာအလွန်အောင်မြင်သောထိတ်လန့်ဂိမ်း၏အရစ်ကျဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာအမေရိကန်သင်္ချိုင်းမြေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ Land & rsquos developer များကကျောက်တုံးများကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြင့်အလောင်းအနည်းငယ်ကိုချွေတာနိုင်သော်လည်းအလောင်းများကိုထားခဲ့ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်မိသားစုနှင့်သူတို့၏အငယ်ဆုံးသမီးကာရယ်အန်းကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသည်။
Poltergeist ၎င်းသည်စတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ်မှရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်းအစွန်းရောက်ဂန္ထဝင်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရုပ်ရှင်ထက်များစွာပိုသည်။ ကာဆယ်လ်ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Heather O & rsquoRourke အပါအ ၀ င်သရုပ်ဆောင်တွေသေဆုံးပြီးနောက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကကျိန်ဆဲခံရသောရုပ်ရှင်ဒဏ္inာရီထဲမှာသရုပ်ဆောင်ထားသူများစွာဟာထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းသေဆုံးခဲ့သည်။
ဒါကရုပ်ရှင် (ကြည့်လို့ရပြီ & rsquot ပြီးသားဆိုရင်) ကိုဒဏ္theာရီ & ldquocurse & rdquo မှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြီး၊ အသက် ၄၀ နီးပါးရှိသော်လည်း၎င်းသည်အသက်အရွယ်မရွေးပရိသတ်များအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဂန္ထဝင်ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်ဖြစ်နေဆဲပင်။ ။
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: Freedom Writers
ဇူလိုင်လ 31 မှထွက်ခွာ
မကြာသေးမီကကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာအားလုံးနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကဲ့သို့ဘာမှမရှိပါ။ 2007 & rsquos လွတ်လပ်ခွင့်စာရေးဆရာများ MTV Films မှခေတ်မီဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းမြို့အထက်တန်းကျောင်းများတွင်ဘဝ၏အနှစ်သာရကိုဖော်ပြသည်။ ဒါဟာစောင့်ကြည့်ဖို့ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကလည်းသင်စဉ်းစားစေသည်နှင့်အကောင်းတစ် ဦး အရာဖြစ်၏။
ဇာတ်လမ်းကဆရာမအသစ် (Hilary Swank) ကိုလှည့်ပြီးသူမအလုပ်သစ်သို့ရောက်သောအခါသူမ၏အတန်းသည်နောက်ခံအမျိုးမျိုးမှကလေးငယ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေကြသည်။ ကျား၊ မမရွေးလူမျိုး၊ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျားမခွဲခြားပဲဒီကလေးတွေဟာအခြားတစ်ဖက်ကိုမြင်နေကြရတယ်။ သူတို့ဟာဂိုဏ်းဂဏအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ခွဲခြားထားတဲ့ရပ်ကွက်အလယ်မှာရှိတဲ့ Long Beach မှာနေတယ်။
သူတို့ကမ္ဘာကြီးမှာမင်းလူဆိုးဂိုဏ်းထဲမဝင်ဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ရတယ်။ သူမသည်အတန်းတစ်တန်းလုံးသည်ဂိုဏ်းအကြမ်းဖက်မှုမှသေဆုံးသွားသူများကိုသိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့အားသူတို့၏အတိတ်မှလွတ်မြောက်ရန်ဂျာနယ်များ ပေး၍ သူတို့၏ပုံပြင်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အားပေးခြင်းအားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့၏အခြေအနေများကြောင့် ၄ င်းတို့၏ဘ ၀ သစ်ကိုအပြည့်အ ၀ လက်ခံရန်ခက်ခဲသော်လည်းဤကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ဘ ၀ များတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားရသောအခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။
လွတ်လပ်ခွင့်စာရေးဆရာများ Netflix ကိုဇူလိုင် ၃၁ ရက်မှထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ဒီနွေရာသီဟာမိသားစုကိုစုစည်းပြီးဒီအစွမ်းထက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအတူတကွကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါပဲ။
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: The Rain
နွေရာသီသည်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ Apocalyptic ကောင်းမြတ်မှုအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, hit ပြပွဲ၏ရာသီ3မိုး သြဂုတ်လမှာလာမယ်၊ စာတန်းထိုးတွေကျော်သွားရင်၊ မိုး ထူးဆန်းတဲ့ရောဂါတစ်ခုကြောင့်လူတွေကိုဖျားနာပြီးသေစေနိုင်တဲ့နောက်မှာရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူစုတစ်စုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြသနာတစ်ခုဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်စွဲလမ်းစေသောပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မိုး ၏အစဉ်အလာကိုအောက်ပါအတိုင်း လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ နှင့် မြူခိုး လူအုပ်စုတစ်စုသည်မသေချာမရေရာမှုများရှိသောကမ္ဘာတွင်ဘဝနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော်ထိုပြပွဲများနှင့်မတူဘဲမိုးရေ၏နက်နဲသောအရာကိုဖော်ထုတ်ရန်အချိန်ယူရသော်လည်းလူများသည်နဂါးများထဲသို့အဘယ်ကြောင့်ပြောင်းလဲကြရသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ယခု၎င်း၏တတိယမြောက်ရာသီတွင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများသည်ဖုတ်ကောင်မိုးရွာခြင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသောခြိမ်းခြောက်မှုအသစ်များကိုကြုံတွေ့ရသည့်အခါလောင်းကြေးများသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။
နောက်တစ်ခု:၅။ အနာဂတ် Trilogy ကိုပြန်သွားပါ
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: Back the Future Trilogy
& ldquoperfect & rdquo ဟုဖော်ပြနိုင်သောရုပ်ရှင်များစွာရှိသည် နောက်ကျောအနာဂတ် အတော်လေးကောင်းစွာကြောင်းဂုဏ်ထူးလက်ခံဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ ၎င်းသည်အချိန်ကုန်ဆုံးသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
နောက်ကျောအနာဂတ် တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးဆက်များစွာခံစားနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအကောင်းဆုံးအဖြေပါပဲ။ သင် & rsquore အဘိုးအဘွားများနှင့်ကလေးများနှင့်အတူအရပျ၌ခိုလှုံနေလျှင်, နောက်ကျောအနာဂတ် trilogy ပာလူတိုိ့ကိုခံစားမယ့်အရာဖြစ်တယ်။
ပထမဆုံးအရစ်ကျမှာ Marty McFly ကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာ Doc Brown & rsquos DeLorean time machine မှာပြန်သွားပြီးသူ့မိဘများချစ်ခြင်းမေတ္တာအဆုံးသတ်သွားအောင်သေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်မာတီသည်မိမိကလေးများကိုအမှားမလုပ်မိအောင်တားဆီးရမည့် (၁၉၈၅ မှနှစ် ၃၀) အနာဂတ် (၃၅ နှစ်) ကို ၂၀၁၅၊ နောက်ဆုံးတတိယမြောက်ရုပ်ရှင်သည် ၁၈၈၅ တွင် Marty နှင့် Doc ကိုပြသပြီးထိုနေရာတွင် DeLorean အား ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ရရှိစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာရမည်။
တစ် All- န်းကျင်ကြီးမြတ် trilogy ပာ, ဖြစ်ခြင်းအပြင် နောက်ကျောအနာဂတ် ရုပ်ရှင်တွေဟာလွမ်းဆွတ်မှုလူအစုအဝေးအကြားပြန်လည်ရှင်သန်မှုခံစားနေကြသည်။ Josh Gad သည်ရံဖန်ရံခါရန်ပုံငွေရှာသူများနှင့်သရုပ်ဆောင်များကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး Michael J. Fox နှင့် Christopher Lloyd တို့ကိုအတူတကွထပ်မံတွေ့ဆုံခြင်းသည်သင်မတွေ့မချင်းသင်လိုအပ်သည်ကိုသင်မသိခဲ့ပါ။
တစ်လောကလုံးအယူခံဝင်နှင့်အတူ နောက်ကျောအနာဂတ် trilogy ပာာဇူလိုင်လကုန်မှာ Netflix ကနေမထွက်ခွာမီမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင် - The Umbrella Academy
ဇူလိုင်လ 31 ရရှိနိုင်ရာသီ 2
Netflix ၏နောက်ဆက်တွဲနှိပ်ပါ အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးနေ့၌ရောက်ရှိသည်။ My Chemical Romance ရှေ့တန်းလူ Gerard Way မှရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများကို အခြေခံ၍ ဤဖြစ်ရပ်သည်ကျန်ရှိနေသေးသော Hargreeves ကလေးများအားသူတို့၏ဖခင် & rsquos သေခြင်း၏နက်နဲသည့်အရာအားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာပျက်သောကမ္ဘာပျက်စေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကူညီခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြသည်။
Hargreeves ကလေးများသည် ၄၃ ယောက်တွင် ၇ ယောက်ဖြစ်ပြီးထိုနေ့တွင်ပင်ထူးဆန်းစွာမွေးဖွားခဲ့ကြရသည်။ သူတို့၏မိခင်များသည်ကြိုတင်ကိုယ်ဝန်မရခဲ့ကြသဖြင့်မွေးဖွားခြင်းကို ပို၍ ထူးခြားစေသည်။ Reginald Hargreeves သည်ကလေးခုနစ်ယောက်ကိုမွေးစားခဲ့ပြီး ၆ ယောက်ကသာသူပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်အရွယ်ရောက်သူဖြစ်သည်။ ယခုသူတို့သည်၎င်းတို့တည်ရှိခြင်း၏သဘောသဘာဝကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်တွင်စူပါဟီးရိုးအုပ်စုများအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ ၎င်း၏ဒုတိယရာသီအတွက်ယခုဖြစ်ပါတယ်။ ပထမရာသီကိုဂျရတ်ဝင်းပရိသတ်များကလက်ခံခဲ့ကြပြီးဇာတ်လမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပြီးယခုပြပွဲသည်ပရိသတ်များ ပို၍ ရရှိခဲ့သည်။ ရာသီ ၂ သည်ရာသီ ၁ ထက်ပိုကြီးပြီး ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်မည်ဟုကတိပြုသည်၊ ပိုမိုမြင့်မားသောလောင်းကြေးများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှုများနှင့်ပရိသတ်များအလွန်တောင့်တနေသောအဖြေများပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခု:၃။ ရပ်။ ကယ်ပါ
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: Stand and Deliver
မပြုမီ လွတ်လပ်ခွင့်စာရေးဆရာများ , 1988 & rsquos ရပ်နှင့်ကယ်ပါ မြို့၏ဒေသများရှိပညာရေးကိုလူအများမြင်တွေ့ခဲ့ပုံကိုပြောင်းလဲစေသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အက်ဒွပ်ဂျိမ်းစ်အယ်လ်မော့စ်သည်သူပုန်များနှင့်ဂိုဏ်းဂဏစွဲများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောအတန်းတစ်ခုကိုသင်္ချာပါရမီအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သောသင်္ချာဆရာ Jaime Escalante ၏အဖြစ်မှန်တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရပ်နှင့်ကယ်ပါ ပညာရေးနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်ဒေသများရှိကျောင်းသားများအားအရင်းအမြစ်များကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသောရပ်ကွက်များရှိကျောင်းသားများနှင့်လက်လှမ်းမီပုံနှင့်ပတ်သက်သောဖိတ်ကြားချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မသန်စွမ်းသောဒေသများရှိကျောင်းသားများသည်သာလွန်ကောင်းမွန်လာသောအခါသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုသံသယ ၀ င်ပြီးစွပ်စွဲခံရသောလူများရှိသည်။ လိမ်။
Escalante သည်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုလက်ခံထားသောအချိန်တွင်သူ၏ကျောင်းသားများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ သူဟာသူ့ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စိန်ခေါ်သူတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်စနစ်ကသူတို့ကိုအတုလုပ်နေပုံရပေမဲ့သူတို့ကိုဂရုစိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြခဲ့တယ်။
ရပ်နှင့်ကယ်ပါ ကလေးတွေနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများအကြားစကားပြောဆိုမှုလာအောင်နှိုးဆွပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ကြယ်တစ်ပွင့်မှသရုပ်ဆောင်ထားသောစွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့်သင့်အားမျက်နှာပြင်၌ကပ်ထားစေခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုစဉ်းစားစေမည့်ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Netflix အစီအစဉ်များနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: ကျိန်ခြင်းခံရသော
ကျိန်ဆဲသည် Netflix ကိုစတင်ခဲ့သည့်အကြီးဆုံးစီမံကိန်းအသစ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် စုန်းမ ။ ဤ Arthurian ၏ပုံပြင်ကိုပြန်ပြောင်းပြောပြခြင်းသည်ကက်သရင်း Langford ကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဓားကိုင်ထားသည့် Nimue အမည်ရှိအမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ သူမသည် Merlin ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်သူမပါဝင်ခဲ့ပြီးသူမသည်ရေကန်၏သမ္မတဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
ကျိန်ဆဲသည် Frank Miller နှင့် Tom Wheeler တို့၏ဂရပ်ဖစ် ၀ တ္ထုကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကြည့်ရှုသူအမျိုးမျိုးကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် plucky ငယ်ရွယ်သောစစ်သည် Arya ထံမှကူညီသည် ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ဇာတ်ကောင်သည်ရဲရင့်သောမိန်းမငယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးငယ်ရွယ်သောကြည့်ရှုသူများအားလေးစားစွာဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နောက်တွဲယာဉ်များနှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင်အနည်းငယ်မျှသာတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး Langford သည် Nimue ကဲ့သို့မယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပါရမီသရုပ်အပြင်, previews လုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြောင်း setting ကိုထုတ်ဖေါ်။ အပြေးသမားများတည်ဆောက်ခဲ့သောကမ္ဘာသည်ပြန်လည်သတိရစေမည့်တစ်ခုဖြစ်သည် လက်စွပ်၏သခင် နှင့်တစ်မျဉ်းစောင်း ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ။ စိတ်ကူးယဉ်ပရိသတ်များ၊ King of Arthur Arthur ၏ဒဏ္orာရီပုံပြင်များသို့မဟုတ်စွန့်စားခန်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်အတွက်၊ ၎င်းသည်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရမည့်ပွဲဖြစ်သည်။
လူစီဖာ။ Image Courtesy John P. Fleenor / Netflix
Netflix ပြပွဲနှင့်နွေရာသီ 2020 တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်: လူစီဖာ
ရာသီ 5A သြဂုတ်လ 21 ရရှိနိုင်ပါ
စာတန်ကို Netflix ဖြင့်မုန်တိုင်းတိုက်မည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ ကောင်းပြီ, လူစီဖာ Morningstar ၏ Legion နှင့်အတူ, သင်တန်း, ပြု၏ လူစီဖာ ကမ္ဘာကြီးကို span သူပရိတ်သတ်တွေ။ ရာသီပွဲ၏ပထမနှစ်ဝက်ကိုသြဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးရာသီ၏ဒုတိယနှစ်ဝက်ကိုယခုအရေးအသားဖြင့်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် FOX မှ ၀ င်ရောက်လာပြီးနောက်ပြပွဲကိုအောင်မြင်စွာရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်ခဲ့သည်။ လူစီဖာ Netflix တွင်အိမ်အသစ်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မူလအစီအစဉ်သည်ပြသမှုအတွက်စတုတ္ထရာသီရှိရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာပရိသတ် ၃ ဦး သည်ရာသီကုန်တွင်ကြီးမားသောတောင်တက်သမားနောက်တွင်ကြိုးဆွဲချထွက်သွားကြပြီးပြပွဲနှင့်ပြိုင်ပွဲအောင်မြင်မှုများကြောင့်ပဉ္စမမြောက်နှင့်နောက်ဆုံးရာသီရရှိခဲ့သည်။ Netflix ကဆဌမရာသီကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လိုက်နာသင့်တယ်
ရာသီ6ပြသ & rsquos နောက်ဆုံးရာသီဖြစ်ဟုဆိုသည်ကြောင့်ပေးထားသောစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လူစီဖာ အခွင့်အရေးများသည် Warner Bros မှပိုင်ဆိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် DC ဖျော်ဖြေရေးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပြည့်ဝသည့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည်။
သို့သော်အရာအားလုံးကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ပထမတစ်ဝက်သို့သွားခြင်းသည်ကောင်းပါသည် လူစီဖာ ရာသီ ၅ တွင်ပြောစရာများစွာရှိသည်၊ သူတို့အားပြောပြရန်အခန်းများစွာရှိသည်။ သရုပ်ဆောင်နှင့် rsquos ဆိုရှယ်မီဒီယာပို့စ်များကိုကြည့်။ ၎င်းတို့သည်နောက်ထပ်ရာသီ ၂ ခုရှိရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။
နောက်တစ်ခု:ကောင်းမွန်သော Netflix (၁၅) ခုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းခံရမည့်အန္တရာယ်ကိုပြသည် '>နောက်တစ်ခု 15 ၏5Prev browse လုပ်ရန်သင်၏←→ (မြား) ကိုသုံးပါ
2016 ခုနှစ် netflix သို့လာမယ့်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်
တစ်ဦးသဘာဝလွန်ရာသီ 12 ဖြစ်ရှိသွား
ထွက် santa2မကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
တစ် ဦး တည်းအိမ်မှာ 1 အခမဲ့စောင့်ကြည့်
လာသောအခါ Hulu အပေါ်အကြိုရာသီ2အသတ်ဖြတ်ဦးမည်